ZTE wuxuu wadahadal kula jiraa inuu iibsado processor-ka Samsung Exynos | Androidsis
Eder Ferreno | | Noticias, ZTE
Toddobaadyadan waxaan arkaynaa sida shirkadda ZTE ay ugu jirto dhibaato weyn. Kadib cunaqabateyntii uu Mareykanku saaray sumadda Shiinaha, taasoo joojisay iibinta taleefannadeeda adduunka oo idil. Shirkaddu waxay wajahaysaa xaalad adag mustaqbalkeeduna xoogaa lama hubo, maxaa yeelay ma isticmaali karaan processor-yada Snapdragon. Laakiin waxay umuuqataa in Samsung ay badbaado kuu noqon karto.
Tan iyo markii ZTE iyo Samsung waxay ku jiraan wadahadalo ku saabsan magaca Shiinaha si ay u iibsadaan processor-yada Exynos. Sidan oo kale, waxaad ku isticmaali kartaa processor-ka shirkadda Kuuriya taleefannadaada. Dariiq looga fogaado xayiraadan ku nool Mareykanka.
Samsung lafteeda ayaa xaqiijisay in ay jiraan wadahadalo u dhexeeya labada shirkadood oo ku saabsan arintaan. Marka waxay umuuqataa in arintu ay aad u culustahay. Xaqiiqdu waxay tahay inay tahay suurtagalnimada kaliya ee ZTE ay leedahay xilligan. Sababtoo ah processor-yada MediaTek waxaa loogu talagalay oo keliya heerar kala hooseeya. Taas oo iyaga siin doonta xaddidaadyo dheeri ah.
In kasta oo xilligan aan si buuxda loo hubin in heshiiskan uu barwaaqoobi doono. Maaddaama sumadda Shiinaha ay ku taal isku dayga lagu hubinayo in go'doominta ka dhacday Mareykanka aysan saameyn ku yeelanaynin processor-yada Snapdragon. Tan awgeed, waxay haystaan ​​taageerada lama filaanka ah ee Donald Trump.
Marka taas Waxyar lama hubo lamana oga hadii ZTE uu ugu dambeyn isticmaali doono processor-ka Exynos. In kasta oo Samsung ay u noqon laheyd fursad weyn in la arko hawlgalka processor-kiisa noocyo kale. Wax noqon kara jid ganacsi cusub mustaqbalka. In kasta oo dhawaan summaddu sheegtay inaanay ka iibinayn noocyo kale.
Sidaa darteed, wada hadaladan lala yeeshay ZTE xoogaa waa layaab. Sababtoo ah Samsung ayaa faallo ka bixisay dhowr jeer in aysan diyaar u ahayn inay iibiso processor-keeda Exynos noocyada kale. Waxay umuuqataa inaan sugi doono wax yar kabadan inta aan ka ogaanayno waxa ku dhacaya sheekadan. Laakiin waan dhageysan doonnaa, maxaa yeelay waa hubaal inuusan ahayn kii ugu dambeeyay ee aan maqalno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung waxay ka iibin kartaa processor-ka Exynos shirkadda ZTE